#Muriin_Axmed_Cigaal ayaa Qoray,, Waa Taariikh Xumaan iyo Samaanba Leh Jeegaantuna Sida ay Dal iyo Dadba uga Sadbursatay Nala Arag - somalilandlivemedia
13:57 5. December 2017
Sagootin Madaxweyne Siilaanyo, midna waan qirayaa. Soo dhawayn Madaxweyne MBC midna waanfaraya..
Anigu xil wareejinta waan si qadimanaya wakhtiga kala wareega jaanis mahayo. Soomaalida ayaa ku maahmaahada “Dameer ayaa xaabo iila taagan”. Marka qofku dan leeyahay weeye . Ana fasaxa dhulka rer Galbeedku ay dhawaan galidoonaan ayaan ana Qoyska fasax gaynayaa oo aan muddo ka maqnaa. Marka waynu yara kala mashquulayna axsaabtayda waji buuga aanu degal wadaagta ku nahay sidaa daradeed waan sii qadimanaya hal dhaanwade oo aan labada Madaxweyne midba gaar u oranaayo.
Mud Axmed Maxamed Maxamuud Aadan (Siilaanyo) qarni badhkii oo buura ah ayuu siyaasadda ku soo jiray si wanaagsan ayaynu u sagootiyayna, mid waan qirayaa inuu Dadkiisa iyo Dalkiisa waxbadan gashaday, haday tahay Halgankii uu hormuudka u aha, dibushiskii Dalka oo uu doorweyn ka soo qaatay iyo taabo galintii nidaamka Xisbiyada badan oo uu aha atoorihii la ciyaarayay Daahir Rayaale Kaahin oo hirgaliyay wixii Madaxweyne Cigaal sii abqaalay oo ahayd in Xisbiyo loo tartamo.
Muddadii xilka Madaxweyanaha uu hayay Mud. Siilaanyo oo 7-sanno baarka ka goysay alleylehe wax wuu qabtay waanay u qorantahay wixii qabsoomay. Waxaan kaloo qirayaa in ay wax badani qaldameen, waxanan ka xusi kara dabacii badnaa ee galay dawladnimada, in rer taliyo oo markii ugu horaysay Somaliland laga dareemay taana waan qirayaa, waxaana abuuritaanka tuhunkaas unkay Wasiiradii ay Madaxweynaha isku degaanka ka soo jeeden. Xirsi Cali Xaji Xasan, Maxamuud Xaashi Cabdi , Cali Xasan Maxamed, Xuseen Cabdi Ducaale iyo Cali Siciid Raygal.
Waxa kaloo dhacday in afarta Wasiirba aanay dhicin muddo xileedkii Madaxweynaha marka laga reebo Xirsi oo iscasilay, waxa kaloo dhacday inay afarta Wasiirba afar guri oo dawladu leedahay qaateen siday doonaanba haku mulkiyaane taasina way dhacday.
Waxa kaloo muddo xileedka dhacay faro farayn badan oo Wasiirada Madaxweynaha ay isku degaanka yihiin iyo xubno badan oo qoyska ah kaga timi hantidii dhexda u ahayd Ummadda. Wasiirada degaanka Madaxweynaha oo kaliya ma ahayn ee Jeegaantu maaamulka way ku dhex jirtay, Wasiirada Dhanka kale ayaa kaalinta labaad ku jiray. Wasiirka Maaliyadu Beerweyn ayay hantiday intaan ogahay, Wasiir Cabdicasiis Maxamed Samaale 3-sanno ayuu aha Raysal Waasaraha lacagta Dalka, maalintii uu tagaayayna 350- shaqaale ah oo degaankiisa ah ayuu maaliyada qoray Daraja (A) siiyay, Wasiir Samsam Cabdi Aadana waa ku raacday.
Xilalka looma sinayn oo qandaraasyada looma sinayn. Xaji Cabdi Aadan oo Wasiirka Maaliyada ay walaalo yihiin Iyo Jimcaale Maxamed Faarax oo ay Safiirka Imaraadka saxiib yihiin iyo inbadan oo kale Somaliland ta kale ee aan jeegaanta ahayn ulamay sinayn. Ku dheeraan maayo Jeegaantu maamulkii Madaxweyne Siilaanyo way shaqaynaysay waanay ka badsatay Beelaha kale . Harti, Gabooye, Garxajis, Madigaan, Gahayle, Samaroon, Ciise, Ayuub iyo Toljecle, Arab Wayne iyo in badan oo kale oo aanan halkan ku soo koobi karaynba jeeganta kama mid ahayn waana laga bursaday.
Xogahaas aan sheegay waxay afeef u yihiin Madaxweynaha cusub Mud. Muuse Biixi Cabdi Xildiid. Waa Mujaahid aan Dalka ka bixin 35-Kii sanno ee u danbeeyay siduu ololahaba Ku galay. Gariirad kasta oo laguu dhigay Madaxweyne ka soo gudubtay si kasta uga gudubo, mar haddii aad maanta taha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee shanaad. Horta waan kugu ducaynayaa xilkaas alle hakula qabto wax hawlyar mahee waa halkii aad waligaa doonaysay. Midbaadse ogaanaysa. Ummadda waxa ku jirta in Muuse Biixi Cabdi yahay nin aan maalin kalihin intii halganka ka danbaysay marka laga reebo labadii sanno ee Wasiirka aad ahayd, hadana aad tahay ninka ugu guryaha badan Baxsane dabadii magaalada Hargaysa, horta tuhunkaas ku maydhay muddo xileedkaaga maanta fursad aad mar labaad isku barto Ummadda ayaad haysataaye oo la dagaalan musuq maasuqa gurashada shilimaadka danyarta iyo xatooyo kasta danbi dhaaf ayaad ku heline. 2 . Waxay bulsho badani qabtaa oo dadbani qabaan beeshada oo alle barakeeyay markeeda horeba ileen waa Awal Ayaanle inay wax badan haystaan oo dhaqaale leh, oo xilal leh oo Caasimadda intii shidnayd ee dhulkeedu qaaliga aha leh, oo tijaar leh oo hoggaanka Ciidamadda leh oo shaqaalaha dawlada inta badan leh . Anigu malihi waxay xaq u leeyihiin ka qaad lakiin wax sadbursiimo ah hasiin. Xukuumaddi Siilaanyo ayaa dadka ka sii qaylinayse agtaadana waliba ka dheere, wixii eed ah adigu kaligaa qaado oo yaanay cidi kula wadaagin.
Mida ugu danbaysa Madaxweyne abtiyaashay amma Garxajis Xisbigoodi waynu isugu tagnay oo ridnay waxay ka filayaan cadaalad bahasha jeegaanta ahna fadlan ka ilaali, Darafyada Awdal iyo Sool dumanayaasha dahsoon ee danyarta iyo Gabooyaha iyo Tumaalaha intaba hoos u eeg.. Adigaa xaq u leh aday ka godaa lakiin fadlan Wasiiradii hore hanagu soo celin. Labada heshiis ee Dekeda iyo Saldhiga Millatari midkasta dib u eeg waxbadan oo khaldan ayaa ku jiree.
Aniga iyo Intii aan KULMIYE aha. Qaarba laga yaaba inay i tuhmaan oo yidhaahdan Muniir wasiir hebel ayaa waxtaray. Anigu maanta ayaan idin sheegaya wixii ugu weyna ee aan Somaliland ka helo bogcad yar ayay ahayd taana Walle Maxamed Aw Siciid iyo Maayarka Hargaysa Cabdiraxmaan Soltelco ayaa itaray oo aan ugu abaal haya. Sow warcad Maha laysma tuhmaan. Shaqaale hosaadna waan aha mushahar kooban qaata. Markii danbena xadhigaygii iyo sidaan ku tagay waynu isla soconay. Labada qodob ayaan kaga sii tagaya labada Madaxweyne ee isbadalaaya..
Tusan.. Muniir Axmed Cigaal
Daawo Kulankii Dhex Maray Maanta Muuse Biixi Iyo Cabdiraxmaan Cirro
Halkan Ka Daawo : Pro Ismaaciil Hurre Bubaa Oo Siweyn U naqdiyay Hadal Kasoo yeedhay Pro Samatar Wajiga Dhabta ah Tariikhda Madaw Ee Musharaxa Xisbiga Kulmiye Muuse Biixina Soo Bandhigay
Newer PostDhawaqyadda Xanafta leh ee Dacartii Doorashadda Iyo Durbaanka Damaashaadka Ee Daanta kale
Older Post Musharraxa Madaxwayne Kuxigeen Xisbiga Waddani Dipl,Amb Maxamed Cali Aw cabdi kahadlay Ugaadhsi Siyaasadeed oo Gobolka Awadal kabilaabmay Laguna beegsanayo Taageerayaashii Waddani